Ihe atụ ise nke e-commerce na-aga nke ọma | ECommerce ozi ọma
Ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịnwe ezigbo echiche nke ihe na-eme ka saịtị ecommerce na-arụ ọrụ nke ọma yana enwere ọtụtụ azụmahịa uru kọmputa. Agbanyeghị, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịmara kpọmkwem ihe atụ nke nyiwe na-aga nke ọma na ngalaba ha. Anyị na-ekekọrịta gị n'okpuru Ihe atụ 5 nke azụmahịa e-commerce na-aga nke ọma.
Onye ọ bụla n’ime ihe atụ e-commerce a nwere ụdị azụmahịa dị nnọọ iche. Anyị na-atụ aro ka ị nyochaa ike na adịghị ike nke onye ọ bụla yana ntụgharị ha na oge ka ị wee hụ etu ha si gbanwee na teknụzụ na mgbanwe nke ọha.
1 Amazon, ihe atụ e-commerce kachasị mma
Amazon, ihe atụ e-commerce kachasị mma
Ikekwe e-azụmahịa platform nke kacha mara amara taa ma gosiputa oganihu. Companylọ ọrụ ahụ enweela ihe ịga nke ọma na ecommerce site na ikwe ka ndị ọzọ ree ngwaahịa ya na weebụsaịtị ya, mana ọ na-enyekwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa na ụdị ọ bụla n'onwe ya.
Ọ bụkwa ọzọ nke ụlọ ahịa Ecommerce na-aga nke ọma na Internetntanetị nke pụtara ìhè maka mkpokọta weebụ ya dị ọcha ma dịkwa mfe, na mgbakwunye na ịnwe ndepụta dị iche iche nke edemede, ọrụ ọchụchọ, mbupu n'efu na iwu niile. Obi abụọ adịghị ya, Ecommerce nke ọma na-aga nke ọma.
Nke a bụ ụlọ ọrụ amaara ama na desktọọpụ na laptọọpụ. O nwekwara a Ecommerce na-aga nke ọma site na ebe ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnweta ụdị ngwaahịa dị iche iche, ego pụrụ iche na ntanetị weebụ kachasị nke ọma iji bulie ahụmịhe ịzụ ahịa ahụ.
Ọ bụ e-commerce weebụsaịtị, amara maka inye mmachi ụdị ngwaahịa niile. Ndị mmadụ nwekwara ike ịdebanye aha ha ma ree ngwaahịa ha ozugbo. Ọ gụnyere mmemme nchekwa ndị na-azụ ahịa na-egosi etu ị ga - esi rụọ ọrụ ndị ahịa.
Ọ bụkwa ihe atụ ọzọ nke ihe ịga nke ọma na ecommerce, lekwasịrị anya n'ire ngwaahịa dịka Ngwa, Akụrụngwa, mkpokọta, T-shirts, wdg. Akọwapụtara ngwaahịa ọ bụla n'ụzọ zuru oke na foto ndị a gụnyere iji gosipụta njirimara ndị bụ isi na nkọwapụta; Obi abụọ adịghị ya na ụdị mbọ niile a gbara iji mepụta Ecommerce mara mma.
You nwere ihe atụ ọzọ banyere azụmahịa kọmputa? N'ezie, enwere ọtụtụ ndị ọzọ na nke ọ bụla nwere ihe dị iche na ya, mana ikekwe ihe ise dị n'elu bụ ụfọdụ n'ime okwu ikpe kachasị dị na ta.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkpọtụrụ ndị ọzọ e-azụmahịa ihe atụHapuru anyi okwu ma gwa anyi ihe masiri gi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ihe atụ 5 nke azụmahịa e-commerce na-aga nke ọma
Kedu otu esi eme nke ọma na ecommerce?
Ọ ga-amasị gị ịnwe kọfị n'ụlọ mmanya nna m.
Zaghachi ka loli
ndị ikom a bụ batimamaron
Ndewo, m ga-achọ ịma ecommerce na agụmakwụkwọ.
a na-akpọ azụmahịa na agụmakwụkwọ e mmụta